WARBIXIN+AKHRISO: M/weyne Muuse Biixi wuu ku haftay Hogaaminta Somaliland, Sool-na waa macsalaameyey!! – Puntlandtimes
June 17, 2018 W LAASCAANO
HARGEYSA(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu 20 April 2018, baahiyey Maqaal ciwaankiisu ‘’M/weynaha Somaliland maka dabaalan doona Dufaanada Colaaddaha, Siyaasadda & Kacdoonka gudihiisa ka jira, mise wuu ku hafan doonaa?, waxaana maanta dib u eegis kusameynaa jawaabta rasmiga ah ee soo baxday waqtigan.
Madaxweyne Muuse Biixi wali waran ku taagan ayey u tahay colaadda Laascaanood, taas oo ku kaliftay xiliga aan qorayno Faaladdan in ay ciidamadiisu godad difaacyo ah ka sameysaynayaan Daafaha Laascaanood, iskadaa Xaduud lasoo xiree, wuu ka quustay dhulka u dhaxeeya Xaduudii UK & Laascaanood ee uu horey u aaminsanaa.
Dagaalkii Tukaraq ee ay ciidamadiisu bilaabeen 8 January 2018, hadda wuxuu isku rogay masrax weyn oo dagaal, hubantida la hayo waxay cadeynaysaa in aan la fursan doonin dagaal markale dhaca, kaas oo sababi doona in labada dhinac midkood u haro gobalka Sool.
Ma jirto wadiiqo u furan Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo aan aheyn in uu dagaal kuwaayo Sool, haddii laga qabsadana waxay ka dhigan tahay in uu lumiyey dhulkii lagu wareejiyey, waxaana xiisado waa weyn oo siyaasadeed ay uga kici doonaan gudaha deegaanadiisa.
JEEGAANTU WAA KALIGEED!!
Tanni waa hal-heys maalmihii u dambeeyey qabsaday Warbaahinta gudaha ee Somaliland, waxaana aad u kala fogaaday Beelaha loogu yeero Beesha Dhexe ee maamulkaas waxaana hadda Burco ka socda Abaabulka Shir gaar ah oo ay leeyihiin beelaha qaarkood.
Xarigii Boqor Buurmadow wuxuu sii furay albaab kale oo ah in xataa Beesha Madaxweyne Muuse Biixi ay qaarkood noqdaan mucaarad ka soo horjeeda ayna gaarsiiyaan ugu badanan in aysan waxba talo iyo tusaale ah la wadaagin Madaxtooyada.
Tanni waa boog weyn oo aan sifudud lagu dhayi-karin, Madaxweyne Biixi ayaa lagu eedaynayaa in uu lug weyn ku leeyahay dagaalka kasocda deegaanka Ceel-Afweyn, waxaana dhinaca Beesha GARJAXIS ay ku eedeynayaan in uu hubeynayo Beesha Habarjeclo, waa eed kale oo saameyntooda ay ka muuqato deegaanada colaaddu ka taagan tahay.
Isimadda dhaqanku wey ku eedaynayaan in uu gabay ugu yaraan kaalintisii ahayd in uu gogol dhigo oo uu goobta booqdo, la kulmo waxgaradka, dhaahiyana dhaliilaha waa weyn ee loo hayo xili uu wajahayo duulaan adag.
KALA JABKA CIIDANKA SOMALILAND!
Kaba dartay Jeneraal sare oo katirsanaa ciidamada Somaliland ayaa ka goostay, Jen, Caare wuxuu ahaa Amaanduulaha ciidamada Somaliland, hadda waa Jamhad hubeysan wuu kasoo horjeeda hogaaminta Muuse Biixi Cabdi, waa halis kale iyo Jamhadeyn cusub oo xoog leh, gabi ahaanba waxaan qarsooneyn in Caare & Beeshisuba ay ka soo horjeedan sidda ay wax ku socdaan.
Tababaro ciidan & hub aruursi ayuu ka wadaa Jenenkan iyo dadka la fikrad ah deegaano kamid ah Barriga gobalka Sanaag, waxaana halis kale oo kuwajahan Hogaaminta Madaxweyne Biixi, waxaana ay dab kushubaysaa halista uu wajahay.
IMAARAATKA CARABTA & ITOOBIYA!!
Siyaasadu wey isbedelaysaa Madaxweyne Muuse Biixi wali mahelin wax cad oo kusaabsan heshiisyadii uu lasoo galay Imaaraatka Carabta & Itoobiya ee kusaleysanaa arrimaha Dekeda & Saldhiga milateri ee magaalada Berbera, waxaana cadba in ay Imaaraatka iyo Itoobiya hadda saxiix uga baahdeen dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Imaaraatku in uu taageero dhaqaale oo lagu yaqaano Carabta siiyeen Muuse Biixi kasokow, ilaa hadda ma jiraan wax ay ka dhaqaajiyeen mashaariicdii ay dhinacyadu isku raaceen, waa caqabad kale oo ilaa hadda aysan lugaha kala bixin Xisbiga Kulmiye ee taagan.
ITOOBIYA, oo jaar la`ah Somaliland Isbedel mug-weyn ayaa sameeyey, waxaana uu gaaray heerkii ugu sareeyey, Ra`iisulwasaarihii cusbaa wuxuu aaday Muqdisho oo uu la kulmay Madaxda dawladda Faderaalka Soomaaliya, waxaa la saxiixay in 4 dekedood ay Itoobiya saxiixa dawladda Faderaalka ku isticmaasho, dabcan Bebera waa fursadda iyo meesha koowaad, balse arrimaha Hogaaminta Muuse dhaawacay waxaa kamid ah in ay Addis Ababa ogolaansho Berbera weydiisatay dawladda Faderaalka ee Muqdisho.
‘’WALAALKEEN (ITOOBIYA) WUXUU BOOQDAY CADOWGEENA (SOOMAALIYA)’’ waa halheys aad looga isticmaalay baraha bulshada, ayna isticmaaleen qaar kamid ah qorayaasha gudaha, waxayna muujiyeen heerka la gaaray, qaar kale ayaa isticmaalay ‘’HADDAAN ADDIS ABABA WALAALO NAHAY, MUXUU NOOGU IMAAN WAYAY’’ weedhahaas oo dhan waxay falaar lagu ganay uga daran yihiin Hogaaminta xaaladdaha adag kusugan ee Muuse Biixi.
Madaxtooyada Somaliland waxay garowsatay in dib looga joogsado Xabsiga oo LIINTA LAGU CABO, waxayna saamaxday Naciima Qorane, Dad loo xiray erayo ay dhaheen, Boqor Buurmadow oo cafis ciidka lagu fasaxay iyo shaqsiyaad kale. Waxaana meel sare gaaray dadka Xabsiyada la galiyey bishii April 2018.
WADANI oo Ka nasan Muuse Biixi!
Xisbiga Mucaaradkah ee Wadani oo ay aad isku hayaan ayaa safar dibadda ugu maqan, waana midda uu ka nasnaa labadii bilood ee lasoo dhafay Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi, laakiin arrinta welwelka leh waa doorashadii baarlamaanka oo kusoo wajahan, oo ay isku hayaan Xisbigaas, markii u dambeysayna Cabdiraxmaan Cirro wuxuu ugu baaqay Muuse in uu is casilo.
LAASCAANOD OO MACSALAMEYSAY MUUSE
Madaxweynaha Somaliland hadda wuxuu wajahayaa dagaal adag oo ku aadan xaduudaha, oo kala noqday Sanaag & Sool, gacantiisana wey ka baxday Laascaanood marka la eegayo sidda ay uga soo horjeedaan Shacabka oo bilaabay in ay gudaha magaalada ku daadiyaan waraaqo ay ugu digayaan, Warbixinadii u dambeeyeyna waxay sheegayaan in Muuse gacantiisa ay ka baxday Laascaanood (RIIX HALKAAN).